Shina: Rafitra vaovao fanomezana tapakila ho an’ny mpitaingina fiarandalamby · Global Voices teny Malagasy
Shina: Rafitra vaovao fanomezana tapakila ho an'ny mpitaingina fiarandalamby
Voadika ny 24 Jona 2018 5:53 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Janoary 2010)
Tahaka ny “Chunyun” – efa akaiky ny vanim-potoana fivezivezena mialoha, mandritra sy aorian'ny Taombaovao Shinoa, nampihatra rafitra tapakila ahitana ny “tena anarana” ny roa tamin'ireo fitaterana an-dalamby lehibe indrindra ao Shina.
Toby fiantsonana ao Guangzhou, distrikan'i Yuexiu, ivon-toerana lehibe ho an'ny fivezivezena ao Atsimon'i Shina i Guangzhou. Sary an'i Don Weinland Guangzhou.
Nitatitra ny Information Times tamin'ny zoma fa ho takiana hampiseho karatra famantarana manan-kery ireo mpandeha mivezivezy amin'ny fiarandalamby ampiasain'ny Vondrona Lalamby Guangzhou na ny Biraon'ny Lalamby Chengdu rehefa eo am-pividianana tapakila. Hosoratana pirinty eo amin'ny tapakila ny anarana sy ny laharan'ny kara-panondro ary tsy maintsy hampiseho ao amin'ny toeram-piantsonan'ny fiarandalamby ny tapakila miaraka amin'ny kara-panondro mifanaraka ny voasoratra ao mba hahazoana miditra.
Miaraka amin'io fanovana amin'ny tapakila io, nitatitra ny Information Times fa afaka mividy tapakila telo ny mpandeha saingy tsy maintsy manome kara-panondro telo samihafa: tapakila iray isaky ny kara-panondro.
Maro ny antony nahatonga ny fampidirana ny rafitra. Nanjary olana ho an'ny Shinoa maro miasa lavitry ny trano ny fahasarotana amin'ny fahazoana tapakila. Mividy tapakila marobe mialoha ireo “Ombivavy mavo”, na mpanera mba hivarotra izany amin'ny vidiny lafo. Mety hampitombo ny fiarovana ao anatin'ny fiarandalamby ihany koa ny fepetra vaovao.
Hita hatramin'ny fetin'ny Taombaovao Shinoa ny antso hisian'ny rafitra vaovao. Nitady vahaolana amin'ny olana malaza antsoina hoe “sarotra azo ny tapakila” ny lahatsoratra navoaka tamin'ny Janoary 2009 tao amin'ny Sina.com
Miatrika ny vanim-potoanan'ny fivezivezena amin'ny taombaovao, nitombo indray ny antso hisian'ny rafitra tapakila amin'ny anarana tena izy. Maika ny fangatahan'ny vahoaka, mieritreritra fa tsy ho voavaha ny “fahasarotana mahazo tapakila” raha tsy amin'ny rafitra tena anarana. Saingy nanambara tamim-pahavitrihana [ny lalamby] fa “avo loatra ny fandaniana”, na amin'ny teny hafa, sarotra ny manatanteraka izany. Mitambatra avokoa ary mbola miteraka fomba fijery malaza ny fiavonavonan'ny sampan-dalamby manana ny satan'ny ampihimamba, ny olana samihafa mandritra ny vanim-potoana fivezivezena amin'ny fialantsasatra.
Araka ny Baidu Encyclopedia, ny rafitra tapakila amin'ny anarana tena izy dia hamerina ny fahatsapana ara-drariny ho an'ny fitaterana an-damasinina mandritra ny vanim-potoana izay efa tena sarotra.
Amin'izao fotoana izao, mandray endrika fitateram-bahoaka tahaka ny fiaran-dalamby ny olona, indrindra ireo izay miasa lavitry ny trano, matetika iharan'ny tsy rariny izy ireo: na dia efa nilahatra nandritra ny fotoana maharitra aza, mbola sarotra ny mividy ny tapakila Ilain'izy ireo maika. Na izany aza, manana fomba isan-karazany hahazoana tapakila tsy ilain'izy ireo maika akory ireo mpanera. Manoloana ireo zava-misy ireo, nanjary safidy tsy misy zo sy fahamendrehana ny fakan'ny olom-pirenena fiaran-dalamby. Na ianao miangavy amin'ny olona manana fifandraisana tsara mba hividy tapakila ho anao na manome ny volanao ho an'ny mpanera ianao.
Ny vanim-potoan'ny fivezivezena amin'ny taombaovao Shinoa, fantatra amin'ny anarana hoe “Chunyun” amin'ny teny Shinoa, no vanim-potoana fivezivezen'ny olona be indrindra manerantany. Araka ny filazan'ny Xinhua News, ny vanim-potoan'ny fivezivezena amin'ity taona ity dia hahitana fivezivezena 2,1 miliara teo anelanelan'ny toeram-piasana, ny tanàna niaviana, ary fitomboana 9,5 isanjato noho ny tamin'ny herintaona.
Tsy ny rehetra no manaiky ny fampiharana ny rafitra tapakila amin'ny anarana tena izy. Nitanisa ireo fitarainana mahazatra mikasika ny fampidirana ny rafitra ny Baidu Encyclopedia:
Mandritra ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra, ny fahasamihafana lehibe indrindra eo amin'ny fitaterana an-dalamby sy ny fitaterana an'habakabaka dia betsaka kokoa ny mpandeha fiarandalamby. Raha vao tafapetraka ny rafitra tena anarana, hitombo ny fotoana ho an'ny fisoratana anarana amin'ny tapakila sy ny fanamarinana ny tapakila, hihena kosa ny fahombiazan'ny asa [ho an'ny mpiasan'ny gara], mety hiteraka fikorontanana amin'ny fivezivezen'ny olona, mampitombo ny vahoaka ary mety hifanitsakitsaka ny vahoaka. Noho izany, sarotra tanterahina ny tena fisian'ny rafitra anarana tena izy.
Mampitombo ny fahasarotan'ny fanaon'ireo mpanera izany saingy tsy mamaha tanteraka ny olana fototra. Azo antoka fa tsy milahatra mba hividy tapakila ireo tena mpanera matihanina. Satria mividy tapakila [avy amin'ny fifandraisana] ao amin'ny biraon'ny tapakila izy ireo, mila manome ny mombamomba anao manokana fotsiny ianao rehefa mividy tapakilan'ny mpanera. Tsotra tahaka izany.
Ny vanim-potoanan'ny fivezivezena amin'ny Taom-baovao Sinoa dia faritana ho fe-potoana efapolo andro mialoha, mandritra, ary aorian'ny Taom-baovao Shinoa, na Chunjie amin'ny teny Shinoa. Araka ny Baidu Encyclopedia, manomboka amin'ny 30 janoary ary mifarana ny 10 Martsa ny vanim-potoana fivezivezena amin'ity taona ity. Ny Taombaovao Shinoa, araka ny alimanaka manara-bolana, dia amin'ny 14 febroary amin'ity taona ity ary maharitra 15 andro.
Ny fampahafantarana momba ny rafitra “tena anarana” dia navoaka voalohany tamin'ny aterineto tamin'ny 10 desambra tao amin'ny bilaogy Shinoa. Nohamafisin'ny mpiasan'ny gara tamin'ny lahatsoratry ny Information Times ny vaovao taty aoriana.